YATHAZONE - Page 11 of 95 - NEWS and ENTERTAINMENT
ယနေ့ခေတ် အသက် ၁၅ ၁၆ ဝန်းကျင်နဲ့ ဂေါ်တယ်ထင်နေကြတဲ့ မိန်းကလေးများ သတိပြု ခုခေတ် ၁၅ ၁၆ ဝန်းကျင် မိန်းကလေးတချို့ ရိုင်းတာကို ဂေါ်တယ်ထင်နေကြတယ် အပြောအဆိုတွေက ထဘီထဲကမထွက်ဘူး ကိုယ့်နှုတ်ထွက်စကား ညစ်ညမ်းမှ အထာကျတယ် ထင်နေကြတယ် ။အင်္ဂလိပ်စကား ညှပ်သုံးရင်တောင် What the Fuck နဲ့ Fuck You Bitch ပဲပြောတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် တန်ဖိုးမထားတာ ဘယ်ယောက်ျားကမှလဲ ကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးထားမှာမဟုတ်ဘူး ။ အနား အားပေးတဲ့သူ ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ် ဝိုင်းပြီး ပင့်ပေးနေတဲ့သူ ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ပေါင်းတဲ့ တခြားသူတွေကလဲ အဲ့လို အသုံးအနှုန်းလောက်ကို အရမ်းဂေါ်တယ်လို့ တလွဲတွေးနေတဲ့သူတွေ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒီလို …
ညောင်းတာ ညာတာတွေအတွက် အနှိပ်အနယ် ကင်းလွတ်တဲ့ လက်တွေ့ အိမ်တွင်းဆေးကောင်း နှိပ်တာနင်းတာကင်းစေရာ(မယုံလျှှင်လက်တွေ့စမ်း)
ညောင်းတာ ညာတာတွေအတွက် အနှိပ်အနယ် ကင်းလွတ်တဲ့ လက်တွေ့ အိမ်တွင်းဆေးကောင်း နှိပ်တာနင်းတာကင်းစေရာ(မယုံလျှှင်လက်တွေ့စမ်း) “ညောင်းတယ်ညာတယ်ပဲ မင်းအမြဲပြောနေတယ်။” “ငါပြောတာကိုမင်းလက်တွေ့လုပ်ကြည့် မဟုတ်ရင် မင်းကြိုက်သလိုပြော..”။ “လုပ်ရမှာကမင်းတာဝန်.ချက်ချင်းပျောက်ကင်းတယ်မပြောဘူးကွ..သက်သာရာက ပျောက်ကင်းတယ်လို့ပဲငါပြောမယ်…။ အဖေပြောသော အကြောင်းသာဖြစ်၏။” အမြဲတမ်းညောင်းညာကိုက်ခဲမှုသည်က စိတ်ပျက်စရာကောင်းလှပြီး၊အကျင့်ပါလှသည်။ ညောင်းညာမည်ပေါ့…တစ်နေ့လုံး ရုံးစားပွဲ၊ ကွန်ပြူတာ၊ဖုံးတို့နှင့် ကွာသည်မရှိ၊တစ်ခါတစ်ရံ စားချိန် သောက်ချိန်မမှန်…။ဒီကြားထဲ မျက်မှန်တပ်သည့်ကြား မျက်ရည်ပူတို့ကစီး၍ကျပြန်သည်။ ထိုပြင်အနှိပ်သမားကအတော်နှင့်အညောင်းအညာ မပြေ အကြောတွေတောင့်တင်းလှ၍ခပ်ကြမ်းကြမ်း နှိပ်နင်းပြန်ရာ ဇက်ကြောပေါင်ကြောနှင့်ခြေသလုံးသားများ အညိုအမည်းပင် စွဲနေတော့သည်။ဒါလည်းအညောင်းပြေသည်မဟုတ်ခဲ့။ “ဒါဖြင့် နည်းသာပေးပါအဖေရာ…ကျွန်တော်အသေအချာလုပ်ပါမယ်”“လုပ်ပါကွာ…တကယ်ထိရောက်ပြီး..တစ်ပတ်တိတိသာ စမ်းလုပ်ပါ..။ မထူးခြားဘဲမနေပါဘူး။ အပန်းလည်းမကြီးပါဘူးကွာ”ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း ရေဇလုံထဲရေနွေးနှင့် ဆား(၃၀)သား ရောစပ်ပြီး ဆားပျော်ရည်ပူ နွေးနွေးလေးထဲသို့ ခြေနှစ်ဖက်အား ခြေမျက်စိအုပ်ရုံ နာရီဝက်လောက် ထည့်စိမ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ အပူလျော့ပါက ရေနွေးအနည်းငယ်ထပ်မံစပ် ပေးရပါမည်။ …
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လူမှုကွန်ယက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ မြန်မာမော်ဒယ်သရုပ်ဆောင် ယမင်းမေဦး
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လူမှုကွန်ယက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ မြန်မာမော်ဒယ်သရုပ်ဆောင် ယမင်းမေဦး မြန်မာ့အွန်လိုင်းလောကမှာတနေ့တခြားရေပန်းစားလာနေတဲ့မော်ဒယ်သရုပ် ဆောင်ယမင်းမေဦးဟာ အခုဆိုရင် ပြည်တွင်းမှာတင် မဟုတ်တော့ဘဲအနုပညာစီးပွားရေး မောင်းနှင်အားကောင်းတဲ့ ထိုင်းမီဒီယာစာမျက်နှာပေါ်တွေမှာ ခပ်စိပ်စိပ်ဖော်ပြခံနေရတာ တွေ့ရပါတယ်။ “အလှအပတို့ အလှတရားတို့ဆိုတာ နယ်နိမိတ်မရှိပါဘူး..နယ်ခြားမဲ့တဲ့ အနုပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဒီကနေ့မှာ နှလုံးသားတိုင်းကိုအရည်ပျော်ကျစေမယ့် မြန်မာအလှပဂေး ယမင်းမေဦးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေး ချင်ပါတယ်”ဆိုပြီး နာမည်ကြီးထိုင်းအနုပညာ စာမျက် နှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Sanook Campus က ဖော်ပြထားပါတယ်။“ရန်ကုန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ယမင်းဟာ ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။Miss Forever Gems 2015 ပြိုင်ပွဲကနေ လူသိများလာတဲ့သူမဟာ မော်ဒယ်အလုပ်တွေ သရုပ်ဆောင်အလုပ်တွေကို ဆက်တိုက်လုပ်နေရပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ.. ဖော်လိုဝါ သုံးသိန်းကျော်ရှိလာတဲ့ နာမည်ကြီးအွန်လိုင်းအိုင်ဒေါ တစ်ဦးဖြစ်လာနေပါတယ်” ဆိုပြီး …
ခံစားချက်ပြပုံတွေက ပြောပြပေးမယ့် လက်တလောသင်ကြုံတွေ့ရမယ့်အရာများ သင့်အနေနဲ့ လက်တလော ဘယ်လိုအရာတွေကို ကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာ သိချင်ပါသလား? ဒီနေ့မှာတော့ စိတ်ခံစားချက်ကိုပြသပေးနေတဲ့ ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြပေးထားမှာဖြစ်ပြီး သင်အနှစ်သက်ဆုံးပုံတစ်ပုံကို ရွေးချယ်ပြီး လက်တလော သင်ကြုံတွေ့ရမယ့်အရာတွေကို လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ (၁) HOPE ( မျှော်လင့်ချက်) သင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက် အောင်မြင်မှုရရှိဖို့ အချိန်နည်းနည်းပဲ လိုပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် အခုချိန်မှာ သင့်အနေနဲ့ သင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အရာတွေကို ဘယ်လိုအခက်အခဲပဲရှိနေရှိနေ လက်မလျော့ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ သေချာပေါက် အောင်မြင်လာမယ့်အရာတွေ ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ ကြိုးစားရမယ်ဆိုပေမယ့်လည်း သင့်အနေနဲ့ အပြည့်အဝအနားယူဖို့ကလည်း လိုအပ်ပြန်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် အနားယူဖို့ မတွန့်ဆုတ်နေပါနဲ့။ (၂) BELIEVE (ယုံကြည်မှု) …
နည်းနည်းတော့ကြမ်းလိမ့်မယ်။ လင်ရှိတဲ့ မယားတွေ မယားရှိတဲ့ ဖွန်ရူးတွေ သေချာဖတ်ပါ
နည်းနည်းတော့ကြမ်းလိမ့်မယ်။ လင်ရှိတဲ့ မယားတွေ မယားရှိတဲ့ ဖွန်ရူးတွေ သေချာဖတ်ပါ တိုက်ဆိုင်လို့ မခံနိုင်ရင် ဘလော့သွားကြပါ… မယားရှိ ယောက်င်္ကျားတွေ၊ လင်ရှိတဲ့ မယားတွေအသေချာ ဖတ်ကြည့်သွားကြပါ … လင်ရှိတဲ့ မယားတွေမယားရှိတဲ့ ဖွန်ရူးတွေ သေချာဖတ်ပါ။ ဒူးနဲ့မျက်ရည်သုတ်ရတဲ့ ဘဝမရောက်ခင် ပြင်သင့်တာကိုပြင်ပါ … သက္ခာ အကြောက်တရား မရှိရင်ဆက်လုပ်ချင်ရာလုပ်ကြပါ။ သူတော်စဉ်ယောင်ယောင် လူကြီးလူကောင်းယောင်ယောင်နဲ့ ကြောင်သူတော် ကြွက်သခိုးမလုပ်ကြပါနဲ့ … Online သုံးပြီး အရွံဆုံးက လင်ရှာမယားရှာ လင်ရူးဖွန်ရူး တွေပဲ။ အိမ်ကညီမ အမနဲ့ဇနီမယားကို လူများတွေကြည့်မှာကို ကြောက်တဲ့လူ သဝန်တိုတတ်တဲ့လူ သူများသားမယားကိုကြတော့ ဘာလို့အချောင်နှိက်ချင်နေကြတာလဲ … တိုက်ဆိုင်လို့ စိတ်ဆိုးရင် တစ်ခါတည်း Block သွားပါ …
အသုံးအနှုံး နည်းနည်းရိုင်းပေမယ့် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပုံတင်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း ဖတ်သင့်တယ်
အသုံးအနှုံး နည်းနည်းရိုင်းပေမယ့် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပုံတင်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း ဖတ်သင့်တယ် Online ပေါ်မှာ ပုံတင်ကောင်းသော အစ်မ ညီမလေးများ မကျော်ပဲဖတ်ပေးကြပါရန် စိတ်ကူးနဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း ခံနေရတဲ့ သူ ဆိုတာ. . . … Online ပေါ်မှာ ပုံတင်ကောင်းသော အစ်မ ညီမလေးများ မကျော်ပဲဖတ်ပေးကြပါရန် ၏စာစောင်ကို ၂၀၁၃ မှာ ရေးသားခဲ့တာပါ ယခု မဖတ်ရသေးတဲ့ သူတွေအတွက် ပြန်တင်ပေးပါရစေ (စာရေးသူအသုံးအနှုံး ရိုင်းကောင်း ရိုင်းနိုင်ပါတယ်…ဒါပေမယ့် ပွင့်လင်းစွာပြောတတ်တဲ့အမူအကျင့်ကြောင့် စာဖတ်သူများ နားလည်ပေးစေလိုပါတယ်…ဒီစာကိုဆုံးအောင်ဖတ်ကြည့်ပါ…ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာအမှန်တရားတစ်ခု သိရှိလက်ခံလိုက်ကြရမယ်ဆိုရင် ရေးရကြိုးနပ်ပါပြီ)Facebook ပေါ်မှာ မိန်းမသားတစ်ချို့ မှားယွင်းမှုတွေ နဲ့ သာယာနေကြတာတွေ့ရတယ်… ပုရိသ ကျားသဘာဝ …
(FAများမပါ) မင်္ဂလာဆောင်အကြို ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ စဉ်းစားရခက်နေတဲ့ ဂေါင်းကြီးတို့အတွက်
(FAများမပါ) မင်္ဂလာဆောင်အကြို ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ စဉ်းစားရခက်နေတဲ့ ဂေါင်းကြီးတို့အတွက် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးသည် သူတို့ဧ။် မင်္ဂလာဆောင်အကြိုဓာတ်ပုံကို ထူးခြားစွာဖြင့် မြွေဟောက်တစ်ကောင်နှင့် အတူတူတွဲရိုက်ခဲ့သည့်အတွက် လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုလုံးကို ဂယက်ထသွားစေခဲ့သည်။ သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးသည် ထိတ်လန့်ဖွယ် မြွေဟောက်တစ်ကောင်ကို ကိုင်ထားပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေအထားနှင့် မြွေကိုအနမ်းပေးနေသည့် ပိုစ့်မျိုးပေးကာ မကြောက်မလန့် ပျော်ရွှင်စွာ ရိုက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုဓာတ်ပုံများကို လိုင်းပေါ်တွင် တင်ခဲ့ပြီးနောက် အများမှ ကြံကြံဖန်ဖန် ရိုက်ခဲ့ကြ၍ မင်္ဂလာမဆောင်ရသေးခင် မြွေကိုက်ပြီးလျှောနေအုံးမည်ဟုဆိုကာ အချို့ကျ ကိုယ့်ဒုက္ခကို ရှာနေတယ်ဟု ပြောဆိုဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးသည် သူတို့ဧ။် မင်္ဂလာဆောင်အကြိုဓာတ်ပုံကို ထူးခြားစွာဖြင့် မြွေဟောက်တစ်ကောင်နှင့် အတူတူတွဲရိုက်ခဲ့သည့်အတွက် လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုလုံးကို ဂယက်ထသွားစေခဲ့သည်။ သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးသည် ထိတ်လန့်ဖွယ် မြွေဟောက်တစ်ကောင်ကို ကိုင်ထားပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေအထားနှင့် …
တွေ့တိုင်း ရှယ်မိတဲ့ ပို့လေးပါ၊ ဒီလိုသားမျိုးကို ပြောတာ..
တွေ့တိုင်း ရှယ်မိတဲ့ ပို့လေးပါ၊ ဒီလိုသားမျိုးကို ပြောတာ.. “စာဖြေဆုရတဲ့ ငွေလေးနဲ့ မယ်တော်ကြီးကို စိန်နားကပ်ဝယ်ဆင်ပေးတဲ့ ဦးဇင်းလေး” စာဖြေဆုရတဲ့ ငွေလေးနဲ့ မယ်တော်ကြီးကို နားကပ်ဝယ်ဆင်ပေးတဲ့ ဦးဇင်းလေး ဘယ်ပန်းချီရေးလို့ မမှီပါပဲတကယ့်ကို စိတ်ကြည်နူးစရာလေးပါပဲ..။ ဘယ်ပန်းချီရေးလို့ မမှီနိုင်တဲ့ ပုံလေးတွေပါပဲ..။ မြင်သူတိုင်းရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဦးဇင်းလေးတို့ သားအမိရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လောက်အထိ ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်နေလိုက်မလဲဆိုတာကို တွေးကြည့်နေကြပါလိမ်မယ်။ ဦးဇင်းလေးရဲ့ ဘွဲ့အမည် ဦးသားပညာ ကျောက်ဆည် မွေးရပ်ဇာတိလို့ ယူဆရပါတယ်.. သင်္ကြန်ကာလလေးမှာ အသင်းစာဖြေပွဲတစ်ခုကနေ ဆုရလို့ မယ်တော်ကြီးအတွက် နားကပ်လေးတစ်ရံဝယ်ပေးပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဆင်မြန်းပေးနေတာကို ကြည့်နူလွန်းလို့ မျှေဝပေးလိုက်ပါတယ်အခုလိုဆုရဖို့အတွက် ဦးဇင်းလေး နေ့နေ့ညည ကြိုးစားခဲ့ရကြောင်းလည်း ရေးသားထားပါတယ်..။ အမေကတော့ …
စျေးပေါပေမဲ့ ပစ္စည်းကောင်းပါတယ် တခါတုန်းက မိန်းမလှလေးတယောက် စားသောက်ဆိုင်ထိုင်ရင်း စားပွဲပေါ်ရှိ မီနူးကဒ်ကလေးမှ တရုတ်စာလုံးများအား ကြည့်ကာ လှလွန်းချ ည့်ဟု မှတ်၍ ကူးယူ လာခဲ့လေသည်။ သူမ အင်္ကျီအသစ် တထည်ချူပ်သောအခါ မီနူးကဒ်မှ ကူးယူလာသော တရုတ်စာလုံးလေးများကို အင်္ကျီရင်ဘတ်ပေါ်တွင် ဇာပန်း ရေးထိုးထားလိုက်သည် ။ ပြီးလျှင် သူ့အင်္ကျီလေးကို ကြည့်ပြီး သိပ်လှပါလားဟု ကြည်နူး နေလေသည်။ တစ်ခါသော် မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲတစ်ခုသို့ အင်္ကျီအသစ်လေးကို ပွဲထုတ် ဝတ်ဆင်သွားတော့သည်။ မင်္ဂလာပွဲတွင် လူကုံတန် တရုတ်အမျိူးသားကြီး တယောက်နှင့် တဝိုင်းထဲ အတူထိုင်ဖြစ်ကြသည်။ တရုတ်ကြီးက မိန်းကလေး၏ အင်္ကျီီရင်ဘတ်ပေါ်က တရုတ်စာလုံးကိုကြည့်ပြီး ” အင်္ကျီီလေးကအတော်လှတာပဲ ဒါနဲ့ ရင်ဘတ်ပေါ်က စာတန်းက …
မိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ရည်းစားကိုယ် သည်းနေအောင် မချစ်ပြသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅)ချက်”
မိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ရည်းစားကိုယ် သည်းနေအောင် မချစ်ပြသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅)ချက်” မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူတစ်ပါးကို မလိမ်ညာဘဲ တကယ်အချစ်စစ်နဲ့ချစ်တာက အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လိုတာထက်ပိုပြီး ကိုယ်ချစ်နေတာကို သည်းသည်းလှုပ်မဖော်ပြသင့်ပါဘူး။ ဒီလိုမဖော်ပြသင့်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅) ချက်ကတော့ ဒီလိုပါ။ လူတိုင်းဒီလိုဖြစ်မယ်ရယ်လို့တော့ မဟုတ်ပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံး အရာတွေကို ဖော်ပြပေးထားတာပါနော် …. ။ (၁) အနိုင်ယူလာမယ် ယောကျ်ားတွေဟာ ပင်ကိုဗီဇကိုက အနိုင်ယူချင်စိတ်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်သာ သူ့ကို သည်းသည်းလှုပ်ချစ်ပြလိုက်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် သူ့ကိုသင် အရမ်းချစ်နေတာကို သိသွားမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကို အနိုင်ယူလာတော့မှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ယောကျ်ားတစ်ယောက်ကို ဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ် ထုတ်မပြတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ. …. ။ (၂) …
Total Users : 253706